MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Club COVID-19 Protection Set - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
သင်၏ အသက်ကို Covid-19 အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်လိုက်ကြပါစို့။ MPT Club မှ အခမဲ့ hand sanitizer နှင့် mask များ ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ rgo47 online shop မှ ဝယ်ယူရုံနှင့် mask အခု (၂၀) နှင့် hand sanitizer တစ်ဗူး အခမဲ့လက်ဆောင် ရရှိနိုင်ပါမည်။ နောက်ထပ် MPT Club ၏ Diamond နှင့် Platinum အဖွဲ့အဝင်များအတွက် rgo47 မှ free delivery ပါရရှိဦးမှာနော်။ ဒီအခွင့်အရေးလေးက ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း MPT Club အဖွဲ့အဝင်တစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်သာရရှိမှာြဖစ်ပြီး အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားလို့ ယခုပဲ rgo47 online shop မှာ စျေးဝယ်လိုက်ကြပါစို့။
MPT Club အဖွဲ့ဝင်မဖြစ်‌သေးပါက အောက်ဖော်ပြပါ link လေးမှ MPT Club သို့ အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါတယ်။
MPT Club သို့စာရင်း ပေးသွင်းရန်
Promotion gift လေးတွေကို ဘယ်လိုရယူလဲ
General Code အားအသုံးပြုရန် "MPT Point" ကိုနှိပ်ပါ
"Tab Column" ကိုနှိပ်ပါ
"Promotion Code" ကိုနှိပ်ပါ
General code အားဖြည့်သွင်း ပေးပို့ပါ
1.MPT Club အဖွဲ့၀င်ဖြစ်ရမည်။ (အဖွဲ့၀င်မဖြစ်သေးသော Customer များအနေဖြင့်လည်း MPT Club တွင်အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။)
2.အဖွဲ့၀င်ရန် – MPT4U မှ MPT Club ကို နှိပ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ လိုတရ page ရှိ ဖော်ပြပါ Link (http://bit.ly/2IIU2jG) မှ တဆင့် ကျား/မ နှင့် မိမိ၏ မွေးနေ့ (eg : DD/MM/YYYY , 03/12/1997) ကို မှန်ကန် စွာဖြည့်သွင်းပြီး အခမဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါသည်။
3.ဤပရိုမိုးရှင်းအချိန်ကာလအတွင်း rgo47 မှ စျေး၀ယ်ယူအားပေးသော MPT Club အဖွဲ့၀င်များအားလုံး ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။
4.rgo47 မှ မည်သည့် ပစ္စည်းကိုမဆို စျေး၀ယ်ယူ အားပေးပြီးပါက rgo47 မှ code တစ်ခုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထို code အား 345 သို့ စာတိုပေးပို့လိုက်ပါက ပရိုမိုးရှင်းရရှိကြောင်းစာတိုပြန်လည်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလက်ခံရရှိလာသောစာတိုအား rgo47 သို့ MPT Club ID နှင့်တကွ screenshot ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းအား ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
5.MPT Club အဖွဲ့၀င်များသည် MPT Club ID တစ်ခုကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
6.ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ထိဖြစ်သည်။
1. MPT Club Covid-19 Protection Set ဆိုသည် မှာ အဘယ်နည်း။
MPT Club အဖွဲ့၀င်များအားလုံး rgo47 မှ စျေး၀ယ်ယူအားပေးပါက အထူးလက်ဆောင်များအား သတ်မှတ် အချိန်ကာလ အတွင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
2.MPT Club Covid-19 Protection Set ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ်မှာ ဘယ်သူတွေပါ၀င်နိုင်သလဲ။
rgo47 online shopping တွင် စျေး၀ယ်ယူအားပေးသော MPT Club အဖွဲ့၀င်များအားလုံး ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့၀င်မဖြစ်သေးသော Customer များအနေဖြင့်လည်း MPT Club တွင်အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းပြီး ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ် များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
3. ဤပရိုမိုးရှင်းကိုရရှိရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင် ရမည်နည်း။
– ၁) MPT Club တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (အဖွဲ့၀င်မဖြစ်သေးသော Customer များအနေဖြင့်လည်း MPT Club တွင်အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။)
– ၂) rgo47 မှ မည်သည့် ပစ္စည်းကိုမဆို စျေး၀ယ်ယူ အားပေးပြီးပါက rgo47 မှ code တစ်ခုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထို code အား 345 သို့ စာတိုပေးပို့လိုက်ပါက ပရိုမိုးရှင်းရရှိကြောင်းစာတိုပြန်လည်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလက်ခံရရှိလာသောစာတိုအား rgo47 သို့ MPT Club ID နှင့်တကွ screenshot ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းအား ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
4.MPT Club COVID-19 Protection Set Set မှ မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိမည်နည်း။
MPT Club Unit COVID-19 Set ၏ အကျိုးခံစားခွင့်မှာ MPT Club အဖွဲ့၀င်များအားလုံး surgical mask အခု ၂၀ နှင့် ၃၀၀၀ကျပ်တန် hand sanitizer တစ်ဘူးအား လက်ဆောင်အနေဖြင့် လက်ခံရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ MPT Club ၏ Diamond နှင့် Platinum Customer များအနေဖြင့် ထိုပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင်များအပြင် ထပ်ဆောင်းအပိုအနေဖြင့် အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမည့် အထူးအခွင့်အရေးကိုပါ လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
5.MPT Club နှင့် rgo47 တို့ပူပေါင်းသော MPT Club COVID-19 Protection Set ပရိုမိုးရှင်း ကိုပါဝင်ရန် အပို အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရမည်လား ။
– ၁) MPT Club အဖွဲ့၀င်ရန်အတွက် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။
အဖွဲ့၀င်ရန် – MPT4U မှ MPT Club ကို နှိပ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ လိုတရ page ရှိ ဖော်ပြပါ Link (http://bit.ly/2IIU2jG) မှ တဆင့် ကျား/မ နှင့် မိမိ၏ မွေးနေ့ (eg : DD/MM/YYYY , 03/12/1997) ကို မှန်ကန် စွာဖြည့်သွင်းပြီး အခမဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါသည်။
– ၂) rgo47 မှ တစ်သောင်းကျပ်နှင့် အထက်စျေး၀ယ်ယူအားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
6.ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် မည်သည့် အချိန် အထိ ဖြစ်သနည်း။
၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ဇွန်လ ၃၀ အထိ ဖြစ်သည်။
7.စျေး၀ယ်သူများသည် တစ်ကြိမ် ထပ်ပို၍ ၀ယ်ယူအားပေးပါက ပရိုမိုးရှင်းကို ထပ်မံရရှိနိုင်ပါသလား။
MPT Club အဖွဲ့၀င်များသည် MPT Club ID တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်သာ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
8.MPT Club COVID-19 Protection Set မှ ရရှိသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို မည်သည့် အချိန်တွင် လက်ခံရရှိမည်နည်း။
rgo47 မှ ၀ယ်ယူအားပေးသော ပစ္စည်းများ ပေးပို့သည့်အခါတွင် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုပါ တပါတည်းလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။